Ihe ị ga-ahụ na Tokyo | Akụkọ Njem
Tokio Ọ bụ otu n’ime nnukwu isi obodo ụwa. Ọ bụ obodo ndị mmadụ na-emegharị ahụ, ihe omume, ohere ndị njem, ọ gbasaghị ma ọ bụrụ na ị gara n'oge ọkọchị, oge oyi, mmiri ma ọ bụ n'oge mgbụsị akwụkwọ. Enwere ihe ị ga-eme.
Ruo afọ iri abụọ ugbu a njem na-eto eto, ma taa, ka ị na-agagharị n’okporo ámá ya, ị ga-anụ asụsụ niile nke ụwa. Yabụ, ndị Tokyo bidoro mepee nke ọma, nwekwuo mmekọrịta mmadụ na ibe na ọ bụ ihe na, ọ bụrụ na ịnọbeghị ebe ahụ, oge eruola ịnụ ụtọ ya.
2 Njem Nleta Tokyo
Taa bụ isi obodo nke mba ọ bụ ezie na ọ bụghị mgbe niile. Ọ bụ obodo na-agbanwe agbanwe oge niile, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, yabụ ọ bụrụ na ị gara afọ ole na ole gara aga mgbe ị laghachitere, ị ga-ahụ ọtụtụ mgbanwe. Iji maa atụ, n’afọ gara aga ọtụtụ bọọlụ gbabara na nke a dị nso na ọdụ Shibuya na ụlọ ahịa ma ọ bụ obere ụlọ mmanya ebe m na-anọ ehihie m na 2018 ... ha anọghị na 2919. Dị ka nke ahụ!
Ọ bụ eziokwu na Tokyo bụ obodo nwere ọtụtụ mmadụ, ndị bi na ya ma ndị si gburugburu gbaa gburugburu na-arụ ọrụ. Ọ bụghị ebe nwere ọtụtụ skyscpers, ọ bụ ezie na ọ nwere ụlọ toro ogologo na nke dị iche. M gụrụ otu mgbe na ọ bụ ihe dịka "nnukwu obodo" echekwara m na nkọwa ahụ dabara nke ọma. Ọ bụghị obodo dị elu, ọ bụ nnukwu obodo.
Kedu mgbe ị kwesịrị ịga Tokyo? Ọfọn dabere na ahụmịhe m n'onwe m abanyela n’oge ọkọchị. Obodo m na-ekpo ọkụ ma na-ekpo mmiri n'oge a n'ihi ya echere m na ọ gaghị emetụta m ma ọ dịghị, Tokyo bụ oven n'eziokwu na-ekpo ọkụ ma na iru mmiri na ọ bụ nnọọ iru ala na-gburugburu. Ma ọ dịkarịa ala, ọ bụrụ na ị bụ oge mbụ na Tokyo, abanyela n'oge okpomọkụ.
Ọnwa kachasị mma iji gaa Tokyo bụ uwe eji egwu mmiri. Anyanwụ, obi ụtọ, ogologo ụbọchị. Mgbe e mesịrị, mgbụsị akwụkwọ dịkwa ezigbo mma na oge oyi, ọ bụ ezie na o nwere ụbọchị dị mkpirikpi na abalị abalị, ọ na-acha nke ukwuu. N'ikwu ya, gịnị ka ị ga-eme na Tokyo?
Njem Nleta Tokyo
Obodo a nwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ ma mee ma ọ dabere na ụdị ụtọ gị. Otu njem naanị ezughị, mana na Tokyo oge izizi ị nwere ike icheta ụfọdụ ebe ị na-agaghị echefu.
Ya mere, ka na-amalite na ebe nkiri ndị njem nleta mara mma na Tokyo. Na etiti Tokyo ha bụ Ubi nke alaeze, ogige mbụ nke Edo Castle, site na mgbe ochie. O nweere onwe ya ịbanye ma ị ga-ahụ moats, mgbidi, ọdọ mmiri na ụlọ ochie. Ọ bụghị nnukwu ihe ma ọ dịkarịa ala na njem mbụ ị kwesịrị ịhapụ ya. Goga ga-abata Tokyo Station ma jee ije ntakịrị.
Ahikabara Ọ dịkwa na mpaghara etiti Tokyo ọ bụ ezie na o nwere ọdụ ụgbọ oloko nke ya. Ọ bụ ya agbata elektrọnik na otakus ihe, Ya mere ọha na eze na-ekewa n'etiti ndị na-achọ electronic components na ndị, si n'akụkụ ụwa nile, na-achọ magazin, nwa bebi na ahia ahia site na usoro anime kachasị amasị gị ma ọ bụ manga. Isi n'okporo ámá, Chuo Dori, na Sọnde, na-emegharị onye na-agafe agafe n'etiti 1 na 6 elekere.
Akụkụ north of tokyo O nwekwara ebe nkiri kachasị elu na oge mbụ na Tokyo. Asakusa bu agbataobi omenala na Buddha ụlọ nsọ nke Sensoji bụ isi ihe na-adọrọ mmasị ya. Ọ malitere na narị afọ nke XNUMX ma nweta ya site na ịga ije na Nakamise, okporo ụzọ ndị na-agafe agafe jupụtara na ụlọ ahịa ncheta. Ọ bụ agbata obi ịga ije n'agbanyeghị na ị nwekwara ike ịkwụ ụgwọ maka ọkara elekere rickshaw maka mmadụ abụọ maka ihe dị 9000 yen, dollar 90.
Oge gara aga nke Asakusa nwere ụlọ ihe nkiri kabuki, ịgba akwụna na mafia mana ọtụtụ ihe furu efu site na ogbunigwe nke Agha nke Abụọ na ọmụmụ ya dị jụụ. Walkinggagharị ebe a ị nwere ike ma were ụgbọ mmiri na osimiri Sumida wee gaa Odaiba Ma gafee akwa na gaa na Tokyo Skytree. Ọ bụrụ na ị ga-emeli ya, gagharịa ugboro abụọ. Gbọ mmiri ụgbọ mmiri ahụ mara mma, ihe ọ bụla ụgbọ mmiri ahụ bụ, ị nwere echiche dị ebube banyere Tokyo.
Na Eluigwe Tokyo ọ bụ ihe dị egwu. Ọ ga-adị mma ka gị na anyanwụ gaa ma nọrọ mgbe anyanwụ dara. Ọ dị ka ị nọ n'ime oghere. Ma ị nwere ike ịnọ maka nri abalị ma ọ bụ nwee biya na-eche echiche Tokyo n'ụkwụ gị, Ogwe 450 site na nche nke abụọ. Ọ mara mma. Ọ na-emepe site na elekere asatọ nke ụtụtụ ruo elekere iri nke mgbede na ọnụ ụzọ mbata, maka ndị ala ọzọ, maka ma ndị nche, 8 yen, ihe dị ka dollar 10.
Ọ bụrụ na-amasị gị ihe ngosi nka ebe a na ugwu bụ Edo Museum - Tokyo na Tokyo National Museum. Kedu ka ị si erute mpaghara a nke obodo? Site na metro, ihu ọma, ma ọ bụ site na ijikọta ụgbọ oloko na metro ma ọ bụrụ na ịnwe Japan Rail Pass.
N'ebe ọdịda anyanwụ bụ otu ahụ. Dị mfe dị ka nke ahụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ebe obibi, họrọ ụlọ nkwari akụ ma ọ bụ ụlọ ma ọ bụ ụlọ mbikọ na ọdịda anyanwụ Tokyo mgbe niile: Shinjuku, Shibuya, Harajuku. Ọ bụrụ n ’ị na-achọ abalị, ndị mmadụ, ndị ntorobịa, ụlọ ahịa, ụlọ mmanya, ebe a na-ere nri, nke a bụ mpaghara kachasị mma ma nọrọ ebe a na-ekwenye na ị nwere ihe niile dị nso na ịgaghị ịkwaga nke ukwuu. Mgbe anyị gbazitere ụlọ na Tokyo dum, afọ abụọ gara aga anyị gbaziri nkeji 10 na Shibuya na ọ bụ ihe kachasị mma anyị meburu. Na ụkwụ n'ebe nile!
Shibuya bụ mpaghara ndị ntorobịa par kacha mma. E nwere nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ mmanya na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ everywhereụ n'ebe niile na Afọ Ọhụrụ, Krismas ma ọ bụ Halloween na-eme ememe ebe a. Na ọtụtụ nkwụsị nke n'okporo ámá n'ihu ụzọ ọpụpụ Hachiko si na ebe a na-ewu ewu n’ụwa nile ma ị nweghị ike ịkwụsị ịgafe ya, ehihie na abalị. Mana n'eziokwu, mpaghara a na-enye ọtụtụ ihe karịa akụkụ a ma ị ga-anwa anwa ịgagharị, pụọ ma fuo.
N'afọ a achọpụtawo m akụkụ ndị m na-amaghị na ndị bụ chi: Mmiri Shibuya, meghere na 2018, nwere ala atọ nke ụlọ mmanya na ụlọ oriri na ọ officesụ restaurantsụ na ọfịs na-esote iyi nke na-apụta site na ala ma nwee ụkwụ na-agagharị n'okirikiri, yana obere echiche dị n'ihu ọdụ na nke ahụ, anaghị m mara ihe kpatara ya, achọpụtabeghị m tupu oge ahụ.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe oyiyi na-anọgide na ebe nchekwa gị wee gaa Shinjuku n'abalị. Ọkụ na ncha ahụ mere ka ị ghara ịhụ ụzọ. Ọ bụ mpaghara buru ibu karịa Shibuya ma ọ dị gburugburu ọdụ ụgbọ oloko kachasị n'ụwa. Ndị njem nde abụọ na-agafe ebe a kwa ụbọchị ma ọ dị mfe ịla n'iyi. More maka ụbọchị ndị a na-ewu maka Egwuregwu Olympic n'afọ ọzọ. Enwere ihe niile, ị ga-anwa anwa ịbanye na igwe mbuli na ịrịgo ma ọ bụ ala, na-achọ ebe ị ga-eri ma ọ bụ ebe ị ga-a drinkụ.
A na-eji ndị Western ụlọ mmanya na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ n'okporo ámá, mana ebe a adịghị adị. Ọ bụ ya mere ị ga-eji gaa n'ọnụ ụzọ ụlọ ahụ, gụọ ihe ịrịba ama nke ihe dị na ala ọ bụla ma nwee obi ike ịga. Nke ahụ dị mfe. Mgbe ụzọ mbata meghere, ị ga-achọpụta ụwa ndị ọzọ. Ọzọkwa ebe a na Shinjuku bụ Golden gai, obere agbata nke warara n'okporo ámá na ibu obere Ogwe.
Golden Gai dị oke njem nlegharị anya taa mana ọ bara uru ịmara ya n'ihi na ndị Japan nwere ezigbo ọmarịcha ma mepee ka ha na ndị mba ọzọ nwee mkparịta ụka, mmanya na-aba n'anya. Imirikiti ụlọ mmanya ndị a na-akwụ ụgwọ 700-800-1000 yen naanị ịnọdụ ala. Ogwe ndị a na-emeghe site na elekere asaa nke ụtụtụ na ụtụtụ niile.
Mgbe ụbọchị ị nwere ike ịga na Ọfịs Gọọmentị nke Obodo ukwu, na ele ya anya na mita 243 nnabata n'efu, ma ọ bụ Ogige Shinjuku. Ogige ọzọ bụ Ogige Yoyogi, ịgagharị n'ehihie, mgbe ị gagharịchara site na nzuzu Harajuku, etiti nke ejiji ndị ntorobịa na cosplay.
Ọzọkwa dị nso bụ Nkeji iri na ise nke Korea, na Shin Okubo. Can nwere ike ịga ụgbọ oloko ma ọ bụ na-eje ije ma ọ bụrụ na-amasị gị k pop Na ihe niile a bụ ebe ọ na-anata ọtụtụ njem ugbu a. Ma ehihie na abalị.
Na ihe anyị na-ahụ mgbe south nke tokyo? Ọfọn, ebe mara mma nke Roppongi, Tokyo Tower na Odaiba Island. Obughi nke nta ighaghi ima ya. Towerlọ elu Tokyo bụ kpochapụwo ma enweghị ike ịhapụ ya 333 mita elu, echiche abụọ na ebe nkiri. Site na ọnwa a, a na-emezi akụkụ ụfọdụ akụkụ ahụ ma ọ bụrụ na ị gaa mgbe e mesịrị ụlọ elu ahụ ga-adị ka nke ọhụrụ.
Na Roppongi bụ Orilọ Mori, na etiti Roppongi Hills. Thislọ a dị narị mita abụọ na iri atọ na asatọ n'ịdị elu ma nwee ụlọ nche ụlọ na elu ihu igwe ị nwere ike ịpụ gaa helipad. Ana m enye ndụmọdụ, ọ dị mma!
N'ịmara ebe ndị a, ị ga-amata ihe ndị dị mkpa na Tokyo na nleta mbụ gị. Enwere, n'ezie, ahụmịhe mara mma dịka ụlọ ngosi ihe nka ama dijitalụ ma ọ bụ kayak site na mmiri dị n'ime, dịka ọmụmaatụ, mana ị ga-ahụ na ozugbo ị matara Tokyo ị ga-achọ ịlaghachi. Ma laghachi. Ma laghachi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Tokio » Ihe ị ga-ahụ na Tokyo
Lọ ụka Sistine